China SSAW Spiral Welded x42 Steel Pipe fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Spiral welded pombi inogadzirwa nekukungurutsa simbi ye low carbon structural simbi kana yakaderera alloy structural simbi mupombi isina chinhu zvinoenderana neimwe helix angle (inonzi forming angle), uyezve welding mapaipi majoini.Inogona kugadzira hombe dhayamita simbi mapaipi kubva nhete simbi mitsetse.
1) Giredhi: Q235B (Yakaenzana neSt37.2, S235JR,ASTM A36),Q345B (Yakaenzana neSt52.3, S355JR), 0Cr13,1Kr17,00Cr19Ni11,1Cr18Ni9,0Cr18Ni11Nb,16Mn,20#,Q345,L245,L290,40#,60#,X42,X46,X70,X80
2)Kunze Diameter: Φ273mm-2420mm
3) Rusvingo Ukobvu: 5mm-22mm
4) Kureba: 6m / 12m (Tinogona kugadzirisa urefu maererano nechikumbiro chako
Nominal Wall Kukobvu mm
(1) mapaipi esimbi ane madhayamita akasiyana anogona kugadzirwa nekushandisa strip simbi ine hupamhi hwakafanana, kunyanya mapaipi esimbi ane dhayamita yakakura anogona kugadzirwa nesimbi yakamanikana.
(2) Pasi pemamiriro akafanana ekumanikidza, kushushikana kwe spiral weld idiki pane iyo yakatwasuka weld, inova 75% ~ 90% yeiyo yakatwasuka welded pombi, saka inogona kutakura kumanikidza kukuru.Kuenzaniswa neiyo yakatwasuka welded pombi ine imwechete yekunze dhayamita, ukobvu hwemadziro hunogona kuderedzwa ne10% ~ 25% pasi pekumanikidza kwakafanana.
(3) Zviyero ndezvechokwadi, kazhinji kushivirira kwedhayamita kuri kushoma pane 0.12%, kutsauka kuri kushoma 1/2000, uye ovality iri pasi pe1%, saka masaizi uye kutwasanuka maitiro anogona kuregererwa.
(4) Kuramba kuchigadzirwa kunobvira.Muchidzidzo, mapaipi esimbi akareba asingagumi anogona kugadzirwa.Kurasikirwa kwekucheka musoro nemuswe kudiki, uye chiyero chekushandiswa kwesimbi chinogona kuwedzerwa ne6% ~ 8%.(5) Kana ichienzaniswa nepombi yakatwasuka yakakwenenzverwa, inochinjika mukushanda, uye yakanakira kushandura mhando uye kugadzirisa.
(6) Chiedza chemidziyo uye shoma yekutanga mari.Inogona kugadzirwa kuita trailer-mhando nharembozha kuti iburitse zvakananga pombi dzakasungirirwa munzvimbo yekuvaka panoiswa mapaipi.
(7) Zviri nyore kuona mechanization uye otomatiki.
Spiral welded pombi inonyanya kushandiswa mupombi yemvura engineering, petrochemical indasitiri, indasitiri yemakemikari, indasitiri yemagetsi emagetsi, kudiridza kwekurima uye kuvaka kwemadhorobha muChina.Inoshandiswa pakufambisa kwemvura: kugovera mvura uye kudhonza.Zvekutakura gasi: marasha gasi, chiutsi uye liquefied petroleum gasi.Inoshandiswa sechimiro: inoshandiswa semurwi wekutyaira pombi uye bhiriji;Mapaipi emadocks, migwagwa uye zvivakwa zvekuvaka, nezvimwe.